အဲ့တော့, တိဘက်၏ကဗျာဆရာ-Sage ၏ပုံပြင်
ကဗျာဆရာ, စိန့်, တိဘက်၏ Sage
အဲ့တော့၏ဘဝတိဘက်ရဲ့အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်ပုံပြင်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာနှုတ်ထိန်းသိမ်းထားကျနော်တို့သမိုင်းကြောင်းတိကျဘယ်လောက်ဇာတ်လမ်း၏မသိနိုငျပါ။ ဒါတောင်မှခေတ်ကာလမှတဆင့်အဲ့တော့ရဲ့ပုံပြင်မရေမတွက်နိုင်သောဗုဒ္ဓဘာသာသင်ပေးနှင့်လာအောင်နှိုးဆွဆက်လက်သိရသည်။
အဲ့တော့ဖွယ်ရှိအနောက်ပိုင်းမွေးဖွားခဲ့သည် တိဘက် အချို့သတင်းရပ်ကွက်များက 1040. သူ့မူရင်းအမည်အားဆိုလိုတာက Mila Thopaga ခဲ့လို့ပြောပေမယ့်, 1052 ခုနှစ် "ကိုနားထောငျဖို့ကြည်နူးဖွယ်။ " သူဟာလှပတဲ့သီချင်းဆိုသောစကားသံခဲ့ကြပါပြီဟုလျှောက်သည်။
Thopaga ရဲ့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝနှင့်များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Thopaga နှင့်သူ၏ညီမငယ်သူတို့ရွာ၏ Darling ခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျးတစျနေ့သည်မိမိအဘ, Mila-Dorje-Seng အလွန်နေမကောင်းကြီးပြင်းသူသေဆုံးခဲ့သည်သဘောပေါက်လာတယ်။ မိမိအခေါနီးရန်သူ၏တိုးချဲ့မိသားစု Calling, Mila-Dorje-Seng အဲ့တော့အသက်အရွယ်နှင့်လက်ထပ်များတို့သည် လာ. တိုင်အောင်သူ့အိမ်ခြံမြေသူ့အစ်ကိုနှင့်အစ်မများကဂရုစိုက်စေဟုမေး၏။
အဲ့တော့ရဲ့အဒေါ်နှင့်ဦးလေးကသူတို့အစ်ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသစ္စာဖောက်။ သူတို့အကြားပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲ. Thopaga နှင့်သူ၏မိခင်နှင့်အစ်မတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြ၏။ အခုတော့အဝေးသို့နှင်လိုက်သော, ငယ်မိသားစုကျွန်ရပ်ကွက်၌နေ၏။ သူတို့ကနည်းနည်းအစားအစာသို့မဟုတ်အဝတ်အစားပေးထားသောနှင့်နယ်ပယ်များတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမြိုးသားညစ်ပတ်အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း, စုတ်ပြဲခြင်း, ခွငျကောငျနဲ့ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ကယခုသူတို့ကိုလုယူလာသောလူများကသူတို့ကိုလှောင်ပြောင်။
အဲ့တော့သည်သူ၏ 15 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုရောက်ရှိသောအခါသူ၏မိခင်ကသူ၏အမွေဥစ္စာကို restore လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကြီးမြတ်အားထုတ်မှုနှင့်အတူသူမ၏တိုးချဲ့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေအဘို့ပွဲပြင်ဆင်ထားရန်အတူတကွသူမ၏မဖြစ်စလောက်အရင်းအမြစ်များအားလုံးခြစ်။
မြင့်မားသောသူမ၏ဦးခေါင်းကိုကိုင်ပြီးသူမ Mila-Dorje-Seng ကသူ၏ခေါနီးအပေါ်ပြောသည်အတိအကျအဘယ်အရာကိုပြန်ပြောပြ, သူအဲ့တော့သူ့ဖခင်ကသူ့ကိုရည်ရွယ်ခဲ့အမွေကိုပေးတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လောဘအဒေါ်နှင့်ဦးလေးလိမ်နှင့်အိမ်ခြံမြေအမှန်တကယ် Mila-Dorje-Seng ပိုင်တစ်ခါမျှ, ဒါကြောင့်အဲ့တော့အမွေမခံရခဲ့ဟုဆိုသည်။
သူတို့ကအစေခံကျွန် '' ရပ်ကွက်ထဲကနှင့်လမ်းများသို့မိခင်နှင့်ကလေးများခိုင်းတယ်။ ငယ်မိသားစုအသက်ရှင်လျှက်နေဖို့တောင်းရမ်းခြင်းနှင့်ယာယီအလုပ်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်။
မိခင်လောင်းကစားများနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အခုဆိုရင်သူမရဲ့ခင်ပွန်း၏မိသားစု၏မုန်းတီးမှုနှင့်အတူ seethed, သူတတ်လေ့လာဖို့အဲ့တော့တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ "ငါသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်ပစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူမက "သင်အမျက်တော်ကိုဖြေမရကြပါလျှင်။ " သူ့ကိုပြောပြသည်
ဒီတော့အဲ့တော့အနက်ရောင်အနုပညာကျွမ်းကျင်နှင့်သူ၏အလုပ်သင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဖူးသူတစ်ဦးသည်လူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချိန်အဘို့, မျှောဆရာသာ ineffectual Charm သင်ပေးတယ်။ အဆိုပါမျှောဆရာတစ်ဦးပဲသောသူဖြစ်သော်လည်း, သူ Thopaga ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာ - ကစစ်မှန်တဲ့ခဲ့မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု - သူလျှို့ဝှက်ချက်သွန်သင်ချက်နှင့်ထုံးတမ်းသည်သူ၏အလုပ်သင်အစွမ်းထက်အပ်ပေးတော်မူ၏။
အဲ့တော့အနက်ရောင်စာလုံးပေါင်းနှင့်ထုံးတမ်းကျင့်တစ်ခုမြေအောက်ဆဲလ်တစ်နှစ်ပတ်နေခဲ့ရသည်။ သူကပေါ်ထွက်လာသည့်အခါသူကသူတို့တစ်တွေမင်္ဂလာဆောင်မှာစုဝေးကြ၏နေစဉ်အိမ်သူအိမ်သားကသူ့မိသားစုအပေါ်ပြိုကျခဲ့သိခဲ့ရတယ်။ အသေသတ်ခြင်းကို - လောဘကြီးအဒေါ်နှင့်ဦးလေး - ဒါဟာနှစ်ခုပေမယ့်အားလုံးကြေမွ။ အဲ့တော့သူတို့လောဘဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခသက်သေခံလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကဘေးဥပဒ်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်ပိုင်ခွင့်ကစဉ်းစားမိတယ်။
မယ်တော်ကျေနပ်မှုမရဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အဲ့တော့မှရေးသားခဲ့သည်များနှင့်လည်း, ဖကျြဆီးခံရသည့်မိသားစုရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံများကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့သူ့အိမ်ကရွာအပေါ်စီးတောင်ပေါ်မှာပုန်းရှောင်ရာနှင့်မုယောစပါးသီးနှံများကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မုနျတိုငျးကွီးကိုခေါ်။
ရွာသားများအနက်ရောင်မှော်သံသယများနှင့်ဒေါသတကြီးအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုရှာဖွေတောင်ပေါ်သို့ရောက်စီးနင်း။ Hidden အဲ့တော့ပျက်စီးကောက်ပဲသီးနှံအကြောင်းပြောနေတာကသူတို့ကိုအမှတ်တမဲ့ကြား။ သူဟာအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့နောက်သဘောပေါက်လာတယ်။ သူကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နှင့်အတူမီးရှို့ဒုက္ခဆင်းရဲ၌သူ၏ဆရာပြန်သွားကြ၏။
အချိန်မှာမျှောဆရာသည်သူ၏ကျောင်းသားသင်ကြားမှုအသစ်တစ်ခုမျိုးလိုအပ်ကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်, သူထွက်ရှာအဲ့တော့တိုက်တွန်းခဲ့သည် တရားဓမ္မ ဆရာ။ အဲ့တော့တစ်ဦးထံသို့ ဝင်. Nyingma မဟာစုံလင် (Dzogchen) ၏ဆရာ, ဒါပေမယ့်အဲ့တော့ရဲ့စိတ်ကို Dzogchen သွန်သင်ချက်အဘို့လည်းလှိုင်းလေထန်ခဲ့သည်။ အဲ့တော့သူကအခြားဆရာကိုရှာကွပျသငျ့သဘောပေါက်, သူ၏ပင်ကိုယ် Marpa သူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ Marpa အဆိုပါ Translator ဟုခေါ်တွင် Marpa Lotsawa (1097 မှ 1012), တစ်ဦးအကြီးနှင့်အတူလေ့လာနေအိန္ဒိယတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ခဲ့ tantric Naropa အမည်ရှိမာစတာ။ Marpa ယခု Naropa ရဲ့တရားဓမ္မအမွေဆက်ခံသူများနှင့် Mahamudra များ၏အလေ့အကျင့်တစ်ခုမာစတာဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲ့တော့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုကျော်ကြဘူး။ အဲ့တော့မီည Naropa အိပ်မက်၌ Marpa အားထင်ရှားခြင်းနှင့်သူ့ကိုအဖိုးတန် ပေး. , ရောက်ရှိလာခဲ့ dorje lapis lazuli ၏။ အဆိုပါ dorje ကိုမှေးမှိန်ပေမယ့်ပွတ်သောအခါ, ကတောက်ပသောအရောင်နှင့်အတူထွန်းလင်းခဲ့သည်။ Marpa သူကိုကြီးစွာသော karmic ကြွေးမြီနှင့်အတူကျောင်းသားတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်မယ်လို့ပေမယ့်သူကိုနောက်ဆုံးမှာလောကီသားတစ်ဦးအလင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူဉာဏ်အလင်းမာစတာဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုဤယူခဲ့ပါတယ်။
အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါဒီတော့ Marpa သူ့ကိုစတင်လုပ်ပိုင်ခွင့်မပူဇော်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစားသူကလက်စွဲအလုပ်သမားလုပ်နေတာအလုပ်လုပ်အဲ့တော့ထားတော်မူ၏။ ဤသည်အဲ့တော့လိုလိုလားလားနဲ့တိုင်ကြားချက်မပါဘဲအမှုကိုပြု၏။ ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးတာဝန်ပြီးစီးနှင့်သင်ကြားရေးများအတွက် Marpa ဟုမေးတိုင်းအချိန်, Marpa ဒေါသအဟုန်သို့ပျံသန်းနှင့်သူ့ကိုပါးရိုက်လိမ့်မယ်။
အဲ့တော့ပေးထားခဲ့တာဝန်များကိုများထဲတွင်တစ်ဦးမျှော်စင်၏အဆောက်အဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရဲတိုက်နီးပါးကိုလက်စသတ်သောအခါ, Marpa ကဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်အခြားတစ်နေရာကတည်ဆောက်ရန်အဲ့တော့သို့ပြောသည်။ အဲ့တော့အများအပြားတာဝါတိုင်တည်ဆောက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ သူကတိုင်ကြားခဲ့ပါဘူး။
အဲ့တော့ရဲ့ဇာတ်လမ်း၏ဤအပိုငျးသူ့ကိုယ်သူဖက်တွယ်ရပ်တန့်နှင့်သူ၏ဂုရု, Marpa ၌သူ၏ယုံကြည်မှုကိုနေရာအဲ့တော့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ဖော်ပြသည်။ Marpa ရဲ့ကွမျးတမျးအဲ့တော့ဟာကျော်လွှားဖို့ခွင့်ပြုမယ့်လိမ္မာသောနည်းလမ်းများဖြစ်နားလည် မကောင်းသောအ Karma သူဖန်တီးခဲ့တယ်။
တစ်ကြိမ်မှာစိတ်ပျက်အားလျော့အဲ့တော့အခြားဆရာမနှင့်အတူလေ့လာဖို့ Marpa စွန့်ခွာခဲ့တယျ။ ကြောင်းမအောင်မြင်ဖြစ်သက်သေပြသောအခါသူတစ်ဖန်ပြန်လည်အမျက်ထွက်သောသူ Marpa မှပြန်လာ၏။ အခုတော့ Marpa နောင်တနှင့်အဲ့တော့သင်ပေးလာတယ်။ သူဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာကိုလေ့ကျင့်ဖို့အဲ့တော့တစ်ဥမင်ထဲမှာအသက်ရှင် Mahamudra မိမိကိုယ်ကိုကျိန်။
တစ်ခုသာအဖြူရောင်ဝါဂွမ်းဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်သူ၏အလေ့အကျင့်ပင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, သူ့ကိုဆိုလိုတာကနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဲ့တော့, ရရှိခဲ့သည် "ဟုဝါဂွမ်း-ဝတ် Mila ။ " ဤအချိန်အတောအတွင်းသူတိဘက်စာပေရတနာကျန်ကြွင်းသောများစွာသောသီချင်းများနှင့်ကဗျာများရေးသားခဲ့သည်။
အဲ့တော့ Mahamudra သွန်သင်ချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်တို့နှင့်ကြီးသောသဘောပေါက် သစ္စာဉာဏ်အလင်း ။ သူကျောင်းသားများအထွက်မရှာပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကျောင်းသားများကိုအထံတော်သို့လာကြ၏။ Marpa နှင့်အဲ့တော့ထံမှသွန်သင်ချက်တွေကိုလက်ခံရရှိသူကျောင်းသားများကိုတို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူကို Gampopa Sonam Rinchen (1153 မှ 1079), ဖြစ်ခဲ့သည် Kagyu တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကို။
အဲ့တော့ 1135 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားပြီထင်နေသည်။
သငျသညျဖွစျလိမျ့မညျကိုအခြားသူများအစေခံရန် fit ။
ငါ့ကိုရှာတွေ့, သင် Buddhahood မှီရကြလိမ့်မည်။ "- အဲ့တော့
Joti Jot နှင့် Guru Nanak Dev မှ
Nichiren ဗုဒ္ဓဘာသာ: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဒါဟာ Go တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
အဆိုပါ Eightfold Path ကို: ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်စတုတ္ထ Noble အမှန်တရား
Ksanti Paramita: စိတျရှညျ၏စုံလင်
Qi (Chi): Qigong & တရုတ်ဆေးပညာမှာတော့အသုံးပြုအမျိုးမျိုးသောပုံစံများ
ယူနိုက်တက် Pentecostal ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအင်တာနေရှင်နယ်
ကာဗွန်-12 နှင့်ကာဗွန်-14 အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
2015 ၏ 50 အကောင်းဆုံး Rap ဂီတသီချင်းများ
2010 ခုနှစ်ဆယ်ပါးအကောင်းဆုံး R & B, Soul နှင့်သီချင်းများ
တစ်ဦးကာဗွန်ဖိုက်ဘာကိတ်မုန့်အဖြစ်တစ်ဦးကဖော်မြူလာ 1 ကား
ထက်နည်း $ 150 8 Paintball Guns
ဓာတု Element ကိုရုပ်ပုံများ - ဓာတ်ပုံပြခန်း
တစ်ဦး Compiler ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်သောင်းချီ၏ sequence
Hilary တစ်ခုမှာ Funny Guy အားဖြင့် Trolled လို့သူကားအဘယ်သူ 20 Photoshop ကိုလွှာတင်သွင်း
ပါရှန်းအင်ပါယာ၏ Timeline ကို
နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း, နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ NYSE အဆောက်အအုံ၏ဗိသုကာ
အရေးပေါ်အစီအစဉ်: ဖြားနာနှင့်, ထိခိုက်အနာတရရရှိမှုများအတွက်ကောလိပ်ကလေးများပြင်ဆင်ပါ
မျိုးကွဲ Romance ရုပ်ရှင်: သဲ, Movies ၏စာရင်း
သငျသညျမှာရယ်မောအကြောင်းကောင်းခံစားရနိုင်သလား 20 အကြိုးပွုလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
ဖော်ပြ. Enthusiasm နဲ့သို့မဟုတ်ရွှင်လန်း